Maitiro ekuisa maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS High Sierra | Ndinobva mac
Maitiro ekuisa maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS High Sierra
Iyo inoshanda sisitimu yeMac makomputa yakagara ichizivikanwa neimwe yeanoshanda masystem ayo anopa mukana wakanyanya wekutapukirwa nemavhairasi. Asi kwenguva yakati kuti uve chikamu, uye nekuti maMac ave chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzese, vabeki vari kunongedza macOS futi.
Apple inoziva izvi uye kuyedza kuvadzivirira kubva mukutapukirwa nyore, gore rakapfuura vakabvisa sarudzo yekugona kuisa maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira neApple, kuitira kuti titadze kumisikidza chero chishandiso chisina kutanga muMac App Store sezviri mukati meApple chirongwa.
Zviripachena, iyo nharaunda yakadzika kuzoshanda kuti ikwanise kutenderedza iyo macOS Sierra muganho uye zviri pachena kuti vakabudirira, sekukuzivisa kwatakaita gore rapfuura. Iyo nyowani vhezheni ye macOS, inonzi High Sierra, inotipa iwo iwo mamwe maperero, asi nerombo rakanaka tinogona kuisvetuka kuti tiise chero application, zvisinei nekwakabva. Kana tichiita shanduko idzi, zvinofanirwa kutariswa kuti kana tisingazive kunobva iko kunyorera, tinogona kuisa panjodzi kwete chete kuchengetedzeka kweMac yedu, asiwo kuvimbika kwedata redu.
Isa maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS High Sierra
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kuenda kune iyo terminal, nekuti kuti tiwedzere chero Chero sarudzo, hatigone kuzviita kuburikidza nesystem sarudzo yekumisikidza.
Kana tangovhura Terminal, tinonyora unotevera kuraira: sudo spctl -master-regedza
Pamberi patenzi pane mapazi maviri (-) kwete rimwe.
Ipapo isu tinotangazve iyo Tsvaga nemirairo: Killall Finder uye ndizvozvo.
Tinogona ikozvino kuenda kuSystem Preferences> Chengetedzo uye Kuvanzika uye kumisikidza chero Chero sarudzo mune Bvumidza maapplication kutorwa kubva:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuisa maapplication kubva kune vasingazivikanwe vanogadzira pane macOS High Sierra
Zvakanaka, ndatenda Nacho !!
Ini ndanga ndoda kukwidziridzira kuHS uye ndisati ndasarudza kuona "matambudziko api" ari kupa ...
Tim Cook anochema "kurwisa kunotyisa kwakanyaradza America"
iStat Menus 6, vhezheni itsva yeiyi ziviso bar ine yakawanda yekuvandudza